Wenza ntoni umntu otshatileyo xa ethandana nomnye umfazi | Amadoda aseStylish
UAlicia tomero | 22/11/2021 18:10 | Isibini kunye nokwabelana ngesondo
Ukungathembeki kukho kwaye phakathi kwamadoda atshatileyo kuxhaphake kakhulu kunokuba kubonakala. Ngokuqinisekileyo uzifumana ukuloo meko, apho udibana khona a indoda etshatileyo kwaye nithandana. Kodwa amathandabuzo awapheli apho, kuba ukuba siyithanda kakhulu loo ndoda, siya kufuna ukwazi indlela eziphatha ngayo xa ethanda.
Into yokuba indoda idibane nayo isenza sicinge loo nto umtshato wabo ayingowona wanelisayo. Ubomi bakho bumele bube yinkqubo eqhelekileyo, bungakhathali, kwaye bude bukruquke. Nangona nantoni na ayichazi isimo sakho sengqondo, uninzi lwabo alukhathali ngokwenza oko bakwenzayo.
1 Injani indoda etshatileyo xa ithandana nomnye umfazi?
2 Indoda itshata njani nesithandwa sayo?
3 Ingcebiso kwindoda etshatileyo enesithandwa
Injani indoda etshatileyo xa ithandana nomnye umfazi?
Ngokuqinisekileyo indoda etshatileyo ifanele baxabise kakhulu iwonga nobudlelwane babo phambi kokuthatha isigqibo. Ngamanye amaxesha amanyathelo amele athathwe awacamngiswa, kodwa ngokuqinisekileyo awukhange ugxile kwindlela oye wafikelela ngayo ekungathembekeni.
Baza kucinga kuphela ukuba bubi kangakanani ubudlelwane babo bangoku kwaye bangafumani bunzima ukuba buyintoni na into onokuthi uyiphose. Abahlaziyi into abanokuzuza ngayo kubudlelwane babo, ukuba kusekho ithemba okanye kukho into enokuphuculwa. Ubuvila yenye yeengongoma zabo kwaye banokuqonda kuphela into abanayo xa ngokwenene belahlekile.
Indoda engathembekanga inako ngokufanayo ukuthandana nomnye umfazi. Kulapha apho kuqalisa khona ukungabi namdla ngokuthe ngcembe kubomi bentsapho yakhe nokungabugcini uphila elo dangatye licimayo. Loo ndoda itshatileyo iqala ukuba intloko yakhe kwenye indawo, uba nzulu ngakumbi kuba engakwazi ukuphumeza zonke iimbopheleleko zakhe ngaxeshanye. Ukude kakhulu kwaye kwiimeko ezininzi unako intloko yakhe icinga ngolunye ubudlelwane.
Ubudlelwane bakhe nomfazi wakhe iyehla ngamandla. Akasakuthandi ukwabelana naye ngamaxesha athile, akanamdla wokumamela iingxaki okanye iimvakalelo zakhe. Ekhaya, imali ayifiki rhoqo, kuba iyanyamalala ngelixa isithandwa sakhe.
Indoda itshata njani nesithandwa sayo?
Ulwalamano lomtshato entsatsheni lunokuchaphazeleka ukungakhathali komnye wabo babini. Usenokucinga ukuba indoda yile ijonga enye, xa umfazi wayo eqala ukuzihoya. Ngokusekelwe kule ngongoma, le nyaniso inokwahluka kwabaninzi imiba ngokwasemzimbeni nangokwengqondo, ukuze umntu onwabe ngakumbi ekhangela ngaphandle kwekhaya ekhangela oko angakufumaniyo ngaphakathi.
Ukuba indoda etshatileyo inenkosikazi, ngokuqinisekileyo iya kufuna ndichithe ixesha elininzi kangangoko ndinako kunye naye. Ubona kulo mfazi yonke into ongathanda kwiqabane lakho langoku. Mhlawumbi ziziyolo nemincili emitsha, into esele ilahlekile kwikhaya lakho.
Isibakala sokwazi ukuba useluthandweni luya kuba ngenxa yokuba akayifumananga ngokwasemzimbeni, kodwa kuzo zonke iimpawu kunye nemilinganiselo ayifumanayo. Ukongeza, uya kuhlala ufuna ukwazi ngakumbi malunga nesithandwa sakho kunye uya kukunika lonke olo thando ukuba akahlali ekhaya.
Uhlala esazi isithandwa sakhe, unjani kwaye wenza ntoni ngenxa yokuba unayo engqondweni. Uthanda ukunyamekela umfanekiso wakhe kunye nokuzilungisa xa edibana naye. Yintoni egqithisile, uba nemincili kunye novalo xa bedibene.
Yintoni unobangela wemithambo-luvo? Zininzi izizathu. Kusenokwenzeka ukuba uvakalelo olulula xa ubona isithandwa sakho siyakuchulumancisa, kodwa kusenokwenzeka ukuba sisihlandlo sokuqala uyenza kwaye ukuvalwa kukwenza ube novalo.
Ingcebiso kwindoda etshatileyo enesithandwa
Ngaphambi kokuthatha naliphi na inyathelo eliqinileyo nelisesikweni, indoda kufuneka ibe neengcamango ezicacileyo uziva njani kwaye ithini imeko. Akuyi kuba lula kuye ukwenza isigqibo ukuba akaboni ekuhambeni kwexesha ukuba luthando oluqinisekileyo aluvayo.
Ekuqaleni kwabo bonke ubudlelwane, yonke into ihlala ihle kakhulu kwaye iphelele. Ungathandana, kodwa inokuba yinto yethutyana. Lubizo'intabatheko', apho unokuba nazo zonke iimvakalelo kufutshane nothando olungagungqiyo, kuba iimvakalelo zinamandla kakhulu.
Isenzo sokuthandana inokuhlala iinyanga ukuya kwiminyaka kwaye akukho nto ingcono kunokuyibona ngokuhamba kwexesha. Kufuneka ucinge ukuba xa uthatha isigqibo sokukhetha omnye umntu kufuneka umamkele nazo zonke iziphene kunye nokulunga kwakhe.
Abantu abaninzi batsalwa ziimvakalelo zabo nothando yinyaniso abangenako ukuyilawula. Kuya kwenzeka ukuba uvakalelo oluvayo ngalo mntu luya kuba lufutshane kwaye ukuba uyenza kanye iyakuphinda amaxesha amaninzi. Ubudlelwane obudibeneyo buza neeparameters ezininzi kwaye phakathi kwabo abantu ababini kufuneka bamkele omnye komnye phambi kwazo zonke iintsilelo kunye nokusebenza ukuncedana ukukhula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Isibini kunye nokwabelana ngesondo » Wenzani umntu otshatileyo xa ethandana nomnye umfazi